Go Healthy Oyster Zinc Plus
Size : 120cap
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့ အမျိုးသားများဖြစ်စေဖို့အတွက် Go healthy Oyster ကို ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ညစ်ညမ်းမှုကင်းစင်သော၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ခရုကမာများမှရရှိတဲ့ အနှစ်သာရများနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး
tauine, amino acid နှင့် zinc တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ် ?
zinc သည် ဆံပင်၊ ခြေလက်သည်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားအင်္ဂါ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး
နှလုံးသွေးကြော၊ အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်အတွက် အေထူးကာင်းမွန်ပါတယ် ?
Oyster က ခန္ဓာကိုယ် သန်မာစေပြီး မျိုးပွားစနစ်နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် ကောင်းမွန်စေရုံမက မျိုးပွားစနစ်နှင့် ဆီးကြိတ်၏ လုပ်ဆောင်မှုတို့ကို အထောက်အကူ ပြုပေးပါတယ် ။ လိင်စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ပေးပြီး ဟိုမုန်း ထုတ်လုပ်မှုကို နှိုးဆွပေးနိုင်ပါတယ် ?
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ- ခရုကမာအနှစ်၊ zinc oxide
သုံးစွဲနည်း- တစ်နေ့လျှင်( ၁ )လုံး အစာနဲ့ (သို့) အစားစားပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။